Ukuphupha ngeRentista Discover ➡️ Fumana kwi-Intanethi ▷ ➡️
I-Reindeer yeyosapho lwexhama kwaye ithathwa njengee-subspecies ezihlala kwimimandla esemantla. Enye into ebalulekileyo kwinyamakazi kukuba inkunzi ayinaimpondo kuphela, njengoko kunjalo nakwezinye iintlobo zexhama, kodwa iimazi nazo zineempondo. Kwinkcubeko yethu, i-reindeer inentsingiselo ekhethekileyo, ngakumbi ngexesha le-Advent, njengoko itsalela isileyi sikaSanta kumabali eKrisimesi.
Ukuba i-reindeer ibonakala kuthi ephupheni, oku kunokwenzeka kwimixholo eyahlukeneyo: Nokuba sibona inyamakazi kwindalo okanye isitayile esitsala isileyi sikaSanta ngelixa libhabha. Ukutolika kwengcongolo njengomqondiso wephupha kuxhomekeke kwezo meko.
1 Uphawu lwephupha «i-reindeer» - ukutolikwa ngokubanzi
Uphawu lwephupha «i-reindeer» - ukutolikwa ngokubanzi
Ngokwenkolelo edumileyo, ephupheni inyamakazi inako amaxesha anzima ukwazisa. Oku ikakhulu kunxulumene nomsebenzi wemihla ngemihla. Umntu ochaphazelekayo ujongene neengxaki ezininzi kunye nobunzima. Usenokungazi nokuba iphi intloko yakho okanye loluphi uphuhliso ekufuneka uye kulo kuqala.
Nangona kunjalo, i-reindeer yamaphupha ikwabonisa ukuba ukunqongophala kozinzo emsebenzini kuyahlawulwa yimeko yezentlalo. Amaphupha anokuvulwa kwisangqa sabahlobo kunye nosapho. inkxaso hamba. Apha ungasoloko ufumana umntu oza kuthetha naye kwaye uxoxe ngemicimbi yobungcali. Kubalulekile ukuba lo mntu kuthethwa ngaye afunde ukuxabisa ukunyaniseka kwabanye abantu ukuba abekhona ukuze abonelele abanye kwixa elizayo xa bafuna uncedo lwakhe.
I-reindeer ikwabonisa imvakalelo yokulayisha ngaphezulu ukuba ibonakala ephupheni kwimeko yeKrisimesi. Kwimeko yamaphupha, inyamakazi itsalela isileyi sikaSanta, kodwa oku kukwavumela izigqibo ukuba zitsalwe malunga neepatheni zokuziphatha ezibaluleke kakhulu zomntu ochaphazelekayo. Kule meko, akazikhuseli kwindawo yakhe yokuhlala, kodwa uyayiphika eyakhe Ukugqithisa. Usenokubuthathela ngoyaba ubunzima uze uzivalele. Umphuphi kufuneka acinge malunga nokuba akufuneki ajongane nemiceli mngeni engcono kwixesha elizayo ukuze akhule kuyo.
Ukutolikwa kwamaphupha ezengqondo, uphawu "lwenyamakazi" lubhekisa kuloo indlela yokuziphatha kwezentlalo lomntu ochaphazelekayo. Kuxhomekeka kwiimeko ezithile zephupha, ibonisa ngaphezulu kwayo yonke into ukuba umntu onomdla uqhuba njani kwiqabane lakhe kunye nendlela ahambelana ngayo nabantu besini esahlukileyo.
Ukuba liphupha elihle le-reindeer, ngokwe-psychoanalysts, elinye likulungelelwaniso oluhambelanayo. Iimvakalelo ezingalunganga, kwelinye icala, zilumkisa ngokungalingani kunye nokungangqinelani.
Ngokwendlela yokomoya etolikwa, inyamakazi ephupheni ikwabonisa inzulu Abahlobo ivuliwe. Ngamanye amaxesha, nangona kunjalo, i-reindeer ingaba phambi kwakho. ilahleko yemikhosi ukulumkisa. Oku kuyinyani ngokukodwa kumaphupha apho wena ngokwakho ubona okanye uqhuba i-sleigh reindeer.